Fihirana Jesosy Mamonjy android - Lalamasaka Hatry ny Ela
par Administrator · Publié 18 mars 2020 · Mis à jour 16 avril 2020
Fihirana elektronika natokana ho vakiana amin'ny Smartphone na Tablette android.
Ity Fihirana ity dia natao manokana ho hampiasain'ireo mpitendry zava-maneno noho izy manafaingana amin'ny fitadiavana sy ny fitadidiana ny hira ary ny clé. Noho izany dia tsy mahasolo velively ny fihirana taratasy (na version imprimée).
Tsara kokoa ny mpitarika hira ao anaty fivoriana sy ny mpivavaka raha mitondra ny fihirana sy ny baiboly taratasy rehefa hamonjy fotoam-bavaka.
Manomboka ny version janv2020 dia misy option ho an'ny mpitendry zava-maneno, ahafahana manome sy hijerena ny clé an'ny hira rehetra.
Ity application ity dia efa nandramana tamin'ny smartphone sy tablette ary mandeha tsara. Noho izany ny developpeur sy ny mpizara dia tsy miantoka izay mety ho tsy fahatomombanana ara-teknika na mety ho fahasimbana amin'ny fitaovana ampiasain'ny mpanjifa.
Fisaorana manokana no atolotra ireo rahalahy sy anabavy développeurs eto amin'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy, niasa tamim-pitiavana namokatra ity fihirana ity.
Installer directement dans Google Play
Version 1.5 android version 4.1 and up
Étiquettes : arg
Article suivant Fihirana Jesosy Mamonjy 2020